Somaliland: Mudaharaadyo Lagu Muujinayo Qarannimada Somaliland oo ka Dhacaya Magaalooyin Caalamka ah - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Mudaharaadyo Lagu Muujinayo Qarannimada Somaliland oo ka Dhacaya Magaalooyin Caalamka ah
Dadweynaha reer Somaliland oo dabaal-degyo ballaadhan ku soo bandhigaya magaalooyinka dalka gudihiisa iyo dibadiisa Arbacada berri ee 18-ka May
Maalinta qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland ee 18-ka May, ayaa si weyn looga xusi doonaa dalka gudihiisa iyo qaaradaha kala duwan ee adduunka Arbacada berri haddii Ilaahay yidhaah, iyadoo xuskan ku beegan yahay sannad-guurada 25aad ee ka soo wareegtay dib ula soo noqoshada madaxbannaanida Somaliland.
Xuska maalinta qaranka ee 18-ka May oo diyaargaraw xoogan loogu jiray bilihii u dambeeyey, waxa xuska ugu weyn ka dhici doonaa caasimadda Hargeysa oo ciiddamada Somaliland ku soo bandhigin doonaan socod gaardis dhoola-tus ah, isla markaana madaxweyne Siilaanyo ka jeedin doono khudbad qaran, iyadoo sidoo kale magaalooyinka iyo degmooyinka dalka oo dhanna xusku ka qabsoomi doono.
Dhinaca kale, jaaliyadaha ku nool dalalka caalamka, ayaa xusas kala duwan ku qaban doona dalalka qaaraddaha adduunka, waxaanna mudaraadyo waaweyn oo lagu muujinayo qaddiyadda madaxbannaanida Somaliland ay ka dhici doonaan magaalooyin badan oo qaaradda Yurub ah, kuwaasoo lagu gudbin doono fariimo la xidhiidha xaqa ay bulshada Somaliland u leedahay inay aqoonsi buuxa ka hesho beesha caalamka.
“Waxa qayb ka ah xuska 18 May iyo doorka jaalliyadaha ee sannadkan 2016 bannaabaxyo waaweyn oo qurbo-jooga Somaliland ka dhigayaan magaalooyin caan ah, sida; magaaladda London (ee cariga Ingiriiska), Stockholm (oo ah caasimadda Sweden), Ottawa (oo ah waddanka Canada), Oslo ee dalka Norway, magaaladda Kassel (oo ah waddanka Jarmalka) iyo magaalooyin kale. Sidoo kale, Jaalliyadaha Somaliland ayaa doorkan ku dedaalay inay si weyn uga soo qaybgeliyaan kulamadooda debbaal-degga masuuliyiin iyo marti-sharaf sare oo uga yimaad goleyaasha kala duwan ee dawladaha martigeliyay, saaxiibada Somaliland, saxaafadda caalamiga ah iyo dhinacyada u muhiimka ah inay goob joog ka noqdaan munaasibadaha lagu gudbinayo farriinta Somaliland. Waxa iyana xusid mudan in dhammaan jaalliyadaha ka jira waddamada waaweyn ay u gudbiyeen dawladaha martigeliyay dhambaallo qoraal ah oo ay kaga codsanayaan inay tixgeliyaan qaddiyadda madaxbannaanida Jamhuuriyadda Somaliland iyo ictiraafka ay ka mudantahay beesha caalamka.” Sidaa waxa lagu yidhi warsaxaafadeed ka soo baxay Wakaaladda Qurbo-jooga Somaliland shalay oo nuqul ka mid ah soo gaadhay wargeyska Jamhuuriya.
Waxa kaloo ay intaas ku dareen; “Diyaar garawga iyo abaabulka weyn ee loogu jiro xuska sannad-guurada 25aad ee ka soo wareegtay dib ula soo noqoshadii madaxbannaanida Jamhuuriyadda Somaliland ee 18 May 2016 ayaa sida ay uga socoto gudaha dalka si la mid ah uga aloosan magaalooyin tiro badan oo waddamada caalamka ee jaalliyadaha Somaliland ku dhaqanyihiin ah dhammaan qaaradaha adduunka.
U diyaar garawga xuskan ee jaalliyadaha ayaa ka socday waddamo badan oo ah Qaaradaha Yurub, Ameerika, Aasiya, Australia iyo Afrika, ilaa bishii koowaad ee sannadkan oo jaalliyaduhu u magacaabeen guddiyo qabanqaabo oo kaalintooda gurmadii abaaraha hawsha u diyaar garawga xuska qaranimaduna dhinac socotay.
Xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa dhinaceeda ku dhiirrigelisay jaalliyadaha Somaliland in si ka duwan oo ka heer sarreysa loo qabto xuskan, iyadoo qorshe halweed kooban oo arrintaas la xidhiidha loo gudbiyay guddiyada jaalliyadaha Somaliland horraantii bishii April. Guddiyada Dalladaha waaweyn ee Jaalliyadaha Somaliland iyo dhammaan guddiyada ururada jaalliyadaha iyo guddiyada qabanqaabada ayaa iyaguna intooda badan si joogta ah uga warbixinaya Wakaaladda Qurbajooga Jamhuuriyadda Somaliland hadba hawlaha qabanqaabadu halka ay u marayaan iyo qorshe hawleedkooda ku aadan xuska qaran.”
Waxa kaloo ay sheegeen in dabaal-degga maalinta qarannimada ee 18-ka May uu ka bilaabmay waddamada caalamka 13 May 2016, isla markaana ay socon doonaan ilaa toddobaadka kowaad ee bisha June, iyadoo xusku ka qabsoomi doono in ka badan ilaa 65 magaalo oo ku kala yaal 40 waddan oo ku kala yaal qaaradaha adduunka oo dhan.
Dalalka Yurub iyo xuska 18-ka May
Waxa xuska 18-ka May lagu qaban doonaa dalalka; Ingiriiska, Jarmalka, Denmark, Finland, Norway Belgium (Biljimka), Netherlands (Holland), Faransiiska, Turkiga, Austria, Talyaaniga iyo Switzerland. Waxa raaca dalalka Maraykanka, Canada, Australia iyo New Zealand.
Xuska Qaaradda Afrika
Maalinta qarannimada Somaliland, waxa laga xusi doonaa dalalka; Itoobiya, Kenya, Tanzania, Uganda, Jabuuti, Suudan, Masar, Koonfur Afrika iyo Koonfurta Suudaan.
Maalinta 18-ka May iyo qaaradda Aasiya
Dalalka Imaaraadka Carabta, Sucuudiga, Qatar, Kuwait, Hindiya, Malaysiya, Bangladesh, Philippines (Filibiin), Shiinaha iyo dalal kale ayaa laga xusi doonaa maalinta qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland ee 18-ka May.
Wakaaladda Qurba-jooga Jamhuuriyadda Somaliland, waxay hambalyo iyo bogaadin u diraysaa dhammaan shacbiweynaha qurbo-jooga Somaliland meelkasta oo ay dunida ka joogaan sida wadaniyadda, xilkasnimada iyo qaddiyadda leh ee ay u oogayaan maalintan qaran 18 May 2016. Si gaar ah waxa bogaadin mudan ururada ardayda Somaliland ee waddamada Afrika iyo Eeshia oo illaa 8 wadan ku qabanaya xuska 18 May sannadkan 2016.
Masuuliyiinta Wakaaladda Qurbo-jooga, ayaa ugu baaqday jaaliyadaha ku nool magaalooyinka London, Stockholm, dalalka Canada iyo Maraykanka inay si xoogan ugu baxaan bannaan-baxyo goobahaas lagu qaban doono, laguna muujinayo maalinta qarannimada Somaliland.